2004 Big Dog Ridgeback Motortrend | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (36726)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9964)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9830)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (9063)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8724)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7483)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7475)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7339)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6449)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (6050)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (6005)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5593)
20 Jun 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 2004 Big Dog Ridgeback Motortrend
ကိုယ့်အခြား WordPress.com ဘလော့ဂျ
Fonzie says: ငါ Ridgeback စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်တွေ့ရှိ, ဟောက်ခြင်းနှင့်ကျောရိုးဉျြးဖဉျြး - ပြန်, ့အတူတူရမ်းပြီးငါ့အကျောရိုး discs တွေကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, (အကောင်းတစ်လမ်းအတွက်) - တင်းကျပ်ရဟတ်ယာဉ်အဆင်ပြေဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်နှင့် Hard-assed biker အမျိုးအစားများကိုတစ်ဦး raucous ၎င်းတို့၏နာကျင်မှုသည်းခံစိတ်ကိုပြလိုခြင်းနှင့်အကြီးအကျယ် kinda လမ်း chromed ကြသည်မဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့, ငါ Motorcycle.Com တကယ် biker နောက်ဆုံးပေါ်သံမြင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖတ်ရှုဖို့လာရာအရပ်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါသိ၏, ငါကကူညီပေးနိုင်ပါသည်လျှင်မူကား၎င်းတို့သည်လိမ့်မည်.
သင် Concours ချစ်နိုင်မည်ဆိုပါကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ကြပြီး, တစ်ချိန်တည်းမှာကပွုနေစဉ်, အဆိုပါရဟတ်ယာဉ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကနေလာမယ့်နေကြသည်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ဖြစ်ကောင်းနားလည်. ဒါကြောင့်နောက်တဖန်, ဟုတ်ကဲ့, ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပါသည်!
သူတို့အားရာတေးသံ spandex စီးနင်းဘောင်းဘီတိုများနှင့်အကာအကွယ်ခွက်ယောက်ျားလေးများမိန်းကလေးတွေထွက်တူး, ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်သငျသညျကိုချိုးဖျက်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏-bits နှင့်အတူဆက်လက်ရှင်သန်လိုလျှင်နဂိုအတိုင်း, သငျသညျ Ok ... ဖြစ်နိုင်သငျနှငျ့အတူကျန်ခဲ့သည်ထက်အနည်းငယ်ပိုပြီးဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူအိမ်ပြန်လာလိမ့်မယ်နှငျ့သငျအကယ်စင်စစ်ကလေးတွေမှပြောပြရန်အလွန်ကြီးစွာသောပုံပြင်ရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလေးတွေ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ buddy '' em စကားကိုနားထောငျဖို့ခစျြလိမျ့မညျ.
သင် Boulevard အပေါ် Ridgeback ရဲ့သေးငယ်တဲ့အရံအကြံပေးအဖွဲ့မှကျေးဇူးတင်စကားသောင်တင်နှင့်သင်တယ်တစ်ခုတည်းသောအရေအတွက်ညီအစ်ကိုများကလပ်ကနေတချို့ dude ၏အိမ်တော်ဖို့ပဲခဲ့ကြသည်အချိန်အကြောင်းကိုတ မှလွဲ.; ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမကသင့်ပုံပြင်များကိုနားထောငျဖို့လိုသည်. စိတ်မကောင်းပါဘူး, စဉ်းစား.
Rolling-နီးပါးတစ် wheelbase နှင့်အတူ9ခြေ 1750cc တစ်ရွှေ့ပြောင်းခံရ, the Big Dog Ridgeback isahead turner to say the least. Roaring outaclaimed 100+ မြင်းကောင်ရေအား (We say “claimed” because the thing is way too long for our Dynojet), the 250mm wide meat on the back chops up the road withafearful growl. Averaging nearly 40 mpg froma4.25-gallon tank, the Ridgeback can cruise all day long if you can!
That’s 160 miles toatank on the highway, which will make that day seem more like five on this hardtail. Meant for boulevard cruising for sure, Sunset Blvd isapopular choice here in Sunset Blvd isapopular choice here in sunny SoCal. သို့သျောလညျး, Sunset is chopped to sh*t and I would avoid it at all costs onaChopper.
Riding all day at freeways speeds is not only possible but can even be enjoyable. သို့သျောလညျး, when you come to the off ramp, you better chomp on the full set of 4-piston PM’s and bring the ‘ol girl down to first gear and be happy they moved the kickstand rearward this year, because the ground clearance is pretty much what you’d expect, non-existent! Lean angle, what’salean angle?
ဒါပေါ့, if you are justaposeur, you can always use the Ridgeback asahandy addition to your home modeling studio, cause no girl wants to pose in the buff on your Concours!
Now that your 86 Testarossa Miami Vice suit have gone out of style, you’ve latched onto the leather boy look of the HD crowd. သို့သျောလညျး, your matching chaps and tassles actually seem to make you feel like just another midlife-crisis non-conformist strictly conforming to the pseudo-trendy fashions of the herd. Panic, horror, despair!
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, I think you’re an idiot, if you actually go out and buy one of these pigs, but I’ll be the first to admit that I simply “don’t get it”. သို့သော်ငြားလည်း, EBass, our resident self-proclaimed “poseur”, seems to think that Choppers (and probably disco, tattoos, cigars, piercings and Howdy Doody) are the cutting edge of “cool” and just the ticket to elevate him to moto-god status. Didn’t somebody once say: “A sucker is born every minute”?
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, EBass decided it would beagood idea to use the MO name to wrangle one of these $27,000 rolling codpieces fromachopper manufacturer. ကံမကောင်းသဖြင့်, EBass decided to sell the story to another rag, so even though MO was legally responsible for the bike, we didn’t really get anything out of it, aside from Fonzie using it asaprop to shoot nudie pics ofalady friend (see below for the rated-PG versions). ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, I digress… I must admit I was more thanalittle curious whatamodern “state of the art” chopper would ride like and I did getachance to spend some time on the Ridgeback, before it went back to its kennel.
ဒါကြောင့်, this is what choppers are all about. If you want people to look at you like they did back when your Testarossa was state of the art, the Ridgeback just might be the bike for you.
What was that? တကယ်ပါပဲ, just as I rolled out of the throttle, the bike’s frame returned to straight and true and the bike steered back to the center of the lane, just in time to bounce overamanhole cover. I’ve probably crossed that same cover 300 times onamotorcycle, but this time was different.
ကံမကောင်းသဖြင့်, as that fake suspension compresses, it changes the bike’s geometry and effective steering inputs (so much for that Moto GP analogy). This makes negotiatingaturn at anything approaching “normal” speeds an exciting proposition to say the least. It is the same type of excitement that you used to get asakid, when you’d sit in your Radio Flyer and use the tow handle asasteering tiller, while bombing down the sidewalk in and out of circular driveways, making Ferrari 312 T4 noises and pretending to be Gilles Villeneuve. (You did make flat-12 Ferrari noises and pretend to be Gilles Villeneuve when you wereakid, didn’t you?)
I guess if you wantamotorcycle that you can use to get noticed, while distracting people’s attention away from that nasty zit you found in the mirror this morning,aflamed-out, billet wheel chopper is as goodaway as any. ဒါပေါ့, if you aren’t afraid of smearing your clown makeup, you could always ride something functional and just wearafull faced helmet. -Sean.
displacement 107 cu. တွင်. (1,750 cc)
လောင်စာဆီစွမ်းဆောင်ရည် 4.25 ဂါလန်
အမျိုးအစားBig Dog »
အမျိုးအစား၏အခြားဆောင်းပါးများ "Big Dog":
အသုံးပြုခံ့ 2006 Big Dog K-9 – reviews, Prices and ...
14.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် အသုံးပြုခံ့ 2006 Big Dog K-9 – reviews, ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာစျေးနှုန်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
14.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2009 Big Dog Wolf
12.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Big Dog Service Manual Owners Guide Books
Big Dog အောက်ပိုင်း-ကုန်ကျစရိတ်မိတ်ဆက် 2010 ပုဆိန်တို – Ult...
10.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Big Dog အောက်ပိုင်း-ကုန်ကျစရိတ်မိတ်ဆက် 2010 ပုဆိန်တို – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
10.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် English Bull Mastif
03.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Big Dog Motorcycles Teams With SKILSAW
29.05.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2006 Big Dog Motorcycle’s Mastiff Road Test Hot Bike
20.05.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Kia K9 review Auto Express
ဆူဇူကီး AN 650 Ducati Desmosedici GP11 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဟွန်ဒါ DN-01 ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Ducati 60 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Brammo Enertia Ducati Diavel စမတ် eScooter တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Bajaj Discover သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Aprilia Mana 850